December 2012 ~ ကိုစောဂျက်
14:14 Ko Saw3comments
ကဲ... ဒါကတော့ Sim Card Data doctor Recovery 3.0 ပါ။ ကိုယ်ဖုန်းဆင်ကဒ် က အချက်အလက်တွေကို ပြန်ရှာလိုရပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ messages အဝင် အထွက်၊ phone book numbers နဲ့ နာမည်တွေ ကိုယ်ဖျက်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ စတာတွေ ကို ပြန်ရှာလိုရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဟိုတစ်လောက ဖုန်းဆင်ကဒ် လော့ဒ် (Locked) ဖြစ်သွား လို့ ဒီကောင်လေးနဲ့ပြန် ပြန်ပြီး ရှာလိုက်ရပါတယ်။ ဘော်ဒါတွေလည်း တစ်နေ့ ကြုံလာရင် သုံးလိုရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင် လိုင်စင်ပါ ထည့်ထားပေးပါတယ်။ 442.42KB ပဲရှိပါတယ်။ 1.MB တောင် မပြည့်ပါဘူး။ အလိုရှိသူများ အောက်က လင့်မှာ downloads ယူလိုက်ပါ။
Sim Card Data doctor Recovery 3.0 downloads links က ဒီမှာပါ
သူအကြောင့်ကို သိချင်ရင် အောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
Mobile SIM card recovery software restore accidently deleted text messages, phone book numbers with name, retrieves IMSI (International Mobile Subscriber Identity) number, inbox read/unread SMS, outbox sent messages. Mobile phone data recovery software requires PC/SC standards or Phoenix standard based USB SIM card reader hardware device to restore information from logically damaged or inaccessible mobile phone SIM card. Software is mostly used as forensic tool by investigating officers or forensics agency for recovering text messages, phone book contact numbers including (last dialed numbers, fixed dialed numbers) from any 3G/GSM mobile network. GSM card forensic tool targets mobile operators, content providers, detectives and legal officers, developers, reverse engineers, and others. Utility cannot recover SIM Card if it is locked using PIN number.
13:30 Ko Saw 1 comment
(NEW UPDATE 6/3/3013)
ဒါကတော့ SuperRam6ပါ။ ကိုယ်ရဲ့ ကွန်ပြုတာ မှာ Ram အားနည်းနေ့ရင် ဒီ SuperRam6နဲ့ အား ပြန်မြှင့်လိုရပါတယ်။ ကွန်ပြုတာမှာ ဆောင် ထားသင့်တဲ့ softwares တစ်ခုပါ။ အထူသဖြင့် တစ်ပတ်ရစ်တွေ ဝယ်ထားတဲ့ဘော်ဒါတွေ ဆောင် ထားသင့်ပါတယ်။ 5.09MB ပဲရှိပါတယ်။ လိုင်စင်ပါ တစ်ခါထဲ ထည့်ထားပေးပါတယ်။ update မလုပ်မိ ပါစေနဲ့။ အလိုရှိသူများ အောက်က လင့်မှာ downloads ယူလိုက်ပါ။
SuperRam6downloads links က ဒီမှာပါ။
SuperRam6အကြောင်းကို အသေးစိတ်သိချင်ရင် အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
pdf ဖိုင့်တွေကို ဖတ်ချင်သူများ အတွက် Adobe Reader
20:58 Ko Saw No comments
ဒါကတော့ Adobe Reader 10 ပါ။ ဘော်ဘော် တစ်ယောက် ဒီနေ့ လမ်းမှာတွေ့တာနဲ့ Adobe Reader လေးမရှိလို လုပ်ပါအုံး ဆိုလို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Adobe Reader မရှိသေးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ လည်း ဆောင်ထားလို့ ရပါတယ်။ လိုအပ်လာရင် သုံးလိုရပါတယ်။ downloads ဆွဲပြီး install သွင်းပြီးတာနဲ့ pdf ဖိုင့်နဲ့ စာအုပ်တွေကို လိုက်ဖတ်လိုရပါပြီး။ 46.MB ရှိပါတယ်။ အလိုရှိသူများ အောက်က လင့်မှာ downloads ယူလိုက်ပါ။
Adobe Reader downloads links က ဒီမှာပါ
SpeedConnect နဲ့ အင်တာနက် speed ကို မြှင့်လိုသူများအတွက်
12:15 Ko Saw 1 comment
အင်တာနက် လိုင်းနှေးသူများ အတွက် SpeedConnect ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ install သွင်းပြီးတာနဲ့ သုံးရုံပါတယ်။ အင်တာနက် speed နည်းသူများ အတွက် SpeedConnect က အသုံးဝင်မှာပါ။ 2.2MB ပဲရှိပါတယ်။ ကဲ ပြောနေကြာတယ်။ အလိုရှိသူများ အောက်က အဆင်ပြေတဲံ လင့်မှာ downloads ယူလိုက်ပါ။
SpeedConnect downloads links က ဒီမှာပါ (mediafire)
အဲမှာ အဆင်မပြေရင် ဒီလင့်မှာ(ziddu) downloads ယူလိုက်ပါ။
နိုင်ငံခြား ဇာတ်ကား တွေကို အွန်လိုင်းကနေ ကြည့်ချင်သူများ အတွက်
19:43 Ko Saw No comments
စောဂျက် ရုင်ရှင် ကြည့်နေသည်။
အဲလို ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီးမသိဘူး။ နိုင်ငံခြားဇာတ် ကားကောင်းကောင်းလေးတွေကို တင်ထားတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ကို တွေ့ထားတယ်။ မေးထားတဲ့ ဘော်ဒါ တစ်ယောက်ရှိတာနဲ့ မသိသေးတဲ့ သူများ အတွက် ပြောတာပါ။ အွန်းလိုင်ကနေ တို့လိုက်တာ ပါ။ ဆိုဒ်နာမည်က http://www.watch32.com/ ပါ။ အပိုင်းက ၄ ၅ ပိုင်းလောက် ခွဲပြီး တင်ထားပေး ပါတယ်။ အရုပ် အသံ ကွာလတီ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကြိုက်သွား ရင် ဘော်ဒါတွေ ကိုလည်း လက်တို့ လိုက်ပေါ့။ အဲ မြန်မာ ဇာတ်ကားတွေ ကြည့်ချင်သူ များ အတွက် ကတော့ http://www.shweo.net/ ပေါ့။ အားလုံးပဲ စိတ်အပန်းဖြေနိုင်ကြပါစေ ဂျာ....
Sim Card Data doctor Recovery နဲ့ ကိုယ်ဖုန်းကဒ်ရဲ့...
SpeedConnect နဲ့ အင်တာနက် speed ကို မြှင့်လိုသူမျာ...
နိုင်ငံခြား ဇာတ်ကား တွေကို အွန်လိုင်းကနေ ကြည့်ချင်...